Global Voices teny Malagasy » Hetsi-panoherana Nampandamoaka Tetikasa Fananganana Foibe Nokleary Tao Atsimon’i Shina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Jolay 2013 5:34 GMT 1	 · Mpanoratra Ronald Yick Nandika nirinandrea
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Makaô (Shina), Shina, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
Taorian'ny telo andro nisesy nanaovana hetsi-panoherana , dia hita fa nandao ny tetikasany hanangana foibe nokleary  ny governemanta monisipalin'i Heshan ao an-drenivohitr'i Jiangmen.
Misy mihitsy ireo mino fa vonjimaika fotsiny io fandresena – izay nohamafisina tamin'ny fifanekena an-taratasy  [zh] navoaka ny 14 Jolay 2013 io. Manahy izy ireo fa mety hafindrana any an-toeran-kafa fotsiny ilay tetikasa, any amin'ny farihin'i Pear River Delta Atsimon'i Shina, izay tanàna isan'ny be mponina indrindra.
Nanao fifampiraharahana maro ny governemantan'i Heshan taorian'ny 12 Jolay nidinan'ireo mponina an'arivony an-dalambe, tezitra ny amin'ny loza mety haterak'io tetikasa io. Tamin'ny voalohany, niezaka nifampiraharaha ny amin'ny hanalavana ny fotoana fakan-kevintra ho haramin'ny 20 andro izy ireo. Kanefa tsy nampitony ny mponina tao an-toerana izany ary tamin'ilay resadresaka natao ho an'ny mpanao gazety ny 13 Jolay no nanambaran'izy ireo fa, “Ho fanajana ny hevitry ny vahoaka, dia tsy hahazo fankatoavana ilay tetikasa”  [zh], eny fa na dia efa nanao sonia ilay fifanarahana voalohany niarahana tamin'ny China National Nuclear Corp (CNNC) aza ny governemanta.
Ireo mpanao hetsi-panoherana nidina an-dalambe manohitra ilay tetikasa fananganana foibe nokleary ny 12 Jolay 2013. Sary avy amin'i Zhu Kunling  tao amin'ny weibo.
Kanefa maro ny olona tsy afa-po tamin'ilay fanambaran'ny governemanta. Taloha mantsy, efa nampihatra io tetika fanemorana io ny governemanta hampitoniana ny fahatezeran'ny vahoaka. Ohatra, tao Dalian dia naatoan'ny governemanta ilay orinasa PX taorian'ny fidinanà olona an'arivony an-dalambe ny taona 2011  tamin'ilay hetsika fanentanana “Not-In-My-Back-Yard” na “Tsy-Ao-Ambadiky-Ny-Tokotaniko”, kanefa dia naverina tamin'ny lahasany teo aloha ihany ilay orinasa afaka volana vitsivitsy  [zh].
“Little bee” (@???-V ) sy “Little Eaffen” (@Eaffen?? ) dia naneho ny heviny tao amin'ny Sina Weibo :
“Little bee” : Taorian'ny fahitana ilay resadresaka natao ho an'ny mpanao gazety, (ilay mpitondra teny) tsy nilaza mihitsy hoe ‘foanana’, fa fotsiny hoe ‘raha mbola tsy misy marimaritra iraisana eo amin'ny fiarahamonina, tsy ho ekena mihitsy ilay tetikasa sy ny fananganana azy. (Moa ve isika) tsy nahazo resaka ?
Little Eaffen : Tena marina ve izany ? Inona no tiany ho lazaina amin'ilay hoe ‘tsy ho ekena’ ? ny hany ekenay dia ny ‘tsy hananganana ilay foibe mandrakizay’!
Misy amin'ireo mponina mihitsy no nilaza fa ‘tetika fanemorana ’ [zh] ihany io fampiatoana io :
Zhang Erfei flyfan : Manontany tena aho hoe tanàna aiza no ho ratsy vintana.
Damn like motorcycle : Moa ve (ny governemanta) hanao fanambaràna hoe ho foanana ny tetikasa fananganana foibe nokleary ao Heshan, ary avy eo nohon'ny fanadihadiana ataon'ireo manam-pahaizana manokana, dia ho hita fa nafindra any Xinhui (tanàna iray hafa ao Guangdong) indray ilay tetikasa ?
Ilay fifanekena nataon'ny governemanta manafoana ilay tetikasa fananganana foibe nokleary [zh].
Nanohy ny hetsika tamin-katezerana sy tamim-panahiana ihany ireo mponina an-jatony maro tao an-toerana ny andro fahatelo, 14 Jolay, nitakiana fifanekena an-tsoratra milaza ny fanafoanana tanteraka ilay tetikasa. Tonga nanotrona ilay hetsi-panoherana, tao an-kianjan'i Donghu  nanamafy ny fanapahan-keviny teo imason'ny vahoaka ireo Ben'ny tanàna lefitra roa. Tsy mbola neken'ny mponina anefa ny fampanantenana am-bava nataon'izy ireo, ka nanao diabe nizotra tany amin'ny tranoben'ny governemanta monisipaly indray izy ireo, tao no nampisehoan'ilay sekretera avy amin'ny komity monisipaly taratasy iray fifanekena an-tsoratra manambara ny fanafoanana ilay tetikasa. Nifampiharahaba izy ireo ary nanao hiakam-pandresena.
Na dia izany aza anefa, tsy mampisava loatra ny ahiahy rehetra iny taratasy voasoratra iny satria ilay fifanarahana nifanaovan'ny governemanta Heshan sonia tamin'ny CNNC dia ahitana fampiasam-bola mitentina 37 lavitr'isa RMB (6 lavitr'isa dolara) . Ary araky ny vaovao farany, tsy mbola nanao fanambarana ny amin'ny mety hisian'ny fiovana ny CNNC. Misy ireo manahy be ihany ny amin'ny ahazoan'io tetikasa io toerana any amin'ny Pearl River Delta. Ohatra, nilaza i “ocean_Joe ” fa :
Ocean_Joe : Mila misaina tsara isika. Inona no antony nampidiran'ny governemanta io tetikasa io ? Maninona no tsy taorian'ny fangalana ny hevitry ny vahoaka izany no nampidirina ? Maninona (ny governemanta) no mitady handray fanapahan-kevitra izay mety hanimba ny fiainantsika sy ny taranatsika, tao anatin'ny 13 andro monja ? Mijanona hatreo ny fifandirana, kanefa iza no mahalala [rahoviana na aiza] no mety hatomboka indray ilay tetikasa amin'ny hoavy ? Miangavy re, aza tsapatsapaina ny fetram-paharetan'ny vahoakan'i Jiangmen sy Pearl River Delta. Any Delta no fonenako.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/07/21/50171/
 nisesy nanaovana hetsi-panoherana: https://globalvoicesonline.org/2013/07/13/chinas-jiangmen-residents-protest-against-uranium-plant/
 foibe nokleary: https://globalvoicesonline.org/2013/07/12/outcry-over-hush-hush-nuclear-fuel-complex-plan-in-southern-china/
 fifanekena an-taratasy: http://ww1.sinaimg.cn/mw1024/887d0614gw1e6m70ttmdvj219y1t0wkc.jpg
 “Ho fanajana ny hevitry ny vahoaka, dia tsy hahazo fankatoavana ilay tetikasa”: http://www.heshan.gov.cn/Article/2013/201307/68919.html
 Zhu Kunling: http://weibo.com/1285020581/zFNGOxk8U?type=repost
 fidinanà olona an'arivony an-dalambe ny taona 2011: https://globalvoicesonline.org/2011/08/14/china-large-nimby-protest-erupts-in-dalian/
 tamin'ny lahasany teo aloha ihany ilay orinasa afaka volana vitsivitsy: http://zh.wikipedia.org/zh-hk/%E5%A4%A7%E8%BF%9E%E5%8F%8D%E5%AF%B9PX%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%B8%B8%E8%A1%8C
 tetika fanemorana: http://weibo.com/ls2010hs
 Tonga nanotrona ilay hetsi-panoherana, tao an-kianjan'i Donghu: http://video.sina.com.cn/v/b/109656496-2047390195.html